» नेपाल आईडलमा सज्जालाई ४ वटा अवार्ड
नेपाल आईडलमा सज्जालाई ४ वटा अवार्ड
१९ माघ २०७६, आईतवार २१:१३
मकवानपुर, १९ माघ । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडलको सिजन ३ मा अहिले गाला राउण्ड चलिरहेको छ । नेपाल आईडलको मञ्चमा रक स्टारको छबि बनाएकी मोरङकी सज्जा चौलागाईँ अहिले चर्चाको शिखरमा छिन् । गाला राउण्डको पहिलो हप्ताको रेस्पेक्ट पर्फोमेन्सको विजेता बनेकी उकनले दोस्रो हप्ता पनि रेस्पेक्ट पर्फोमेन्सको अवार्ड जितेकी छिन् । शुक्रबार उनले नेपथ्यको ‘जोगले हुन्छ भेट’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । निकै नै रकिङ प्रस्तुति दिएकी सज्जालाई ३ जना निर्णायक र विशेष अतिथिले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स दिएकी सज्जाले सोही प्रस्तुतिका आधारमा सज्जालाई ‘रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक’ को अवार्ड जितेकी हुन् । अवार्ड जितेसँगै उनले रेस्पेक्टको ईसेवा वालेटबा नगद २५ हजार रुपैयाँ जितेकी छिन् । उनले काठमाडौँ अडिसन र थिएटर राउण्डको बेस क्याम्पबाट ‘बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे’ को अवार्ड पनि जित्न सफल भएकी थिईन् । यसर्थ उनले नेपाल आईडलमा ४ वटा अवार्डहरु जितिसकेकी छिन् । उनी मात्र अहिलेसम्म सिजन ३ मा ४ पटक अवार्ड जित्ने एकमात्र प्रतियोगी हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
सज्जाको भोटिङ कोड एनआई ११ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७११ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मार्फत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्ुनहुन्छ । आदरणिय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।